Montenegro vs Romania - neziqu World Cup | izibikezelo Lezinyawo
usuku Match: 4 Septhemba 2017 | Kuthunyelwe: 4 Septhemba 02:02 2017 GMT + 2 | Ithiphu Okubukwe 594 izikhathi.
Montenegro vs Romania – neziqu World Cup
Montenegro vs Romania – neziqu World Cup, EMontenegro 2nd e Iqembu E nge 13 amaphuzu. Sinenkosi esilinganayo amaphuzu njengoba Denmark kodwa uyamlandela Poland ngamaphuzu amathathu. Ngemva kokuloba ukunqoba obugculisayo e Kazakhstan ezinsukwini ezintathu ezidlule, bayoba egcwele ukuzethemba abangena kuleli game. Amathemba abo ukufinyelela indawo yesibili kakhulu uyaphila futhi zisesimweni kuhle okwamanje kulokho kuyinto kakhulu ngisho iqembu. They`ve kwaba kuhle okuqinile ekhaya lokhu umjikelezo, ingazigingqagingqi Kazakhstan futhi Armenia, ngenkathi kokulahlekelwa amaphuzu kuphela Poland. Ukuze lo mdlalo Tumbakovic kuyodingeka isikwati esigcwele kulahlwa.
Romania kukhona 4th nge 9 amaphuzu, kokuba eqoshiwe onqobayo ezimbili kuphela kokubili limelene Armenia. Owokugcina, elafika ezinsukwini ezintathu ezidlule, lwalungolukhulu kuhle akukholisi, ngoba wakwazi ukugqashula Armenia kuphela ngomzuzu 91. Benza uphuthelwe penalty ngomzuzu 55th, kodwa kwaba ukusebenza namanje kusekude oyifunayo futhi ngendlela engeyinhle ukuletha umdlalo ezine-winless run ekupheleni. Babheka akukholisi e yonke imidlalo yabo ngaphandle 5:0 ingazigingqagingqi-Armenia futhi cishe ngaphandle amathuba yangempela ukufinyelela endaweni yesibili. Thanda Montenegro, Romania kufanele futhi nge squad egcwele lapha.
Montenegro wabonisa ukusebenza kuhle ngesikhathi lezi Ukuphumelela, ne ukuhlulwa kuphela ngokumelene Armenia umi njengoba isibonelo omubi. Romania ngakolunye uhlangothi, dissapointed nge indlela yabo kanye nemiphumela yabo ibonisa ukuthi. Montenegro babe amathuba namaqiniso eyodwa yokuqinisekisa indawo yesibili eqenjini, ikakhulukazi azi ukuthi lizosingatha Denmark ngo-Okthoba ngemuva eshaya nabo bebonana zokugcina. Ngakho-ke, bayobizwa ekufuneni amaphuzu amathathu lapha, futhi ngeke bakholwe bangawathola emva show okuhle Kazakhstan. Uma ucabangela Montenegro sidlalela ekhaya, futhi umbono wabo jikelele kangcono, Mina ababheke njengezinto izintandokazi lapha. Futhi ngenkathi Romania ungase ugaye a stalemate, Mina can`t uwabone ukuthatha wonke amaphuzu amathathu. Ngakho-ke, Esekelwa Sebawoti nge 0 asian ukukhubazeka kubonakala sengathi indlela eqondile okufanele bahambe kuyo.